Xafladdii furista sannad howleedka baarlamanka oo dhowaan bilaaban doonta - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sawirle: Jessica Gow/TT
Xafladdii furista sannad howleedka baarlamanka oo dhowaan bilaaban doonta
La daabacay tisdag 15 september 2015 kl 13.36
Labada duhur-nimo ayaa albaabada loo furi doonaa xafladda furitaanka sannad-howleedka xubnaha baarlamanka. Halkaasina oo uu xariga ka jari doono boqorka dalka Sweden Carl Gustav-kii 16-aad. Iyada oo uu dabadeed soo ban-dhigi doono siyaasadda dawladdiisa ee sannadka foodda innagu soo haya Stefan Löfven, madaxa dawladda Sweden.
Sannad walba hadahaayaa ayaa xariga laga jaraa xafladda furitaanka sannad howleedka xildhibaannada baarlamanka. Iyada oo sannadka qeyb ka yihiin dadyoow kun iyo 90 ruux kor u dhaafaya.
-Iminka waxaa soo geleya fardihii hor kacayey iyo gaari-faraskii ey saarnaayeen reer boqor.
- Af-hayeenka baarlamanka ayaa boqorka iyo xubnaha reer boqor ku soo dhoweeyay xarunta xafladda ee furitaanka sannad howleeedka baarlamanka. Boqorka ayey la socdeen dhammaam xubnaha reer boqor, ilmihiisa iyo sayadooda.
- Boqorka ayaa qudbaddiisa ku soo gabagabeeyey: Aan ku talo-galno rabitaan adag iyo sidii aan ku taageeri lahayn dadyoowga tabaaleey-san ee dhibaatadu haysato.
- Iminkana waxaa khudbaddiisii bilaabay Stefan Löfven, madaxa dawladda Sweden.
Xafladda furitaanka sannad-howleedka xildhibaannada baarlamanka ayaa mowduuca ugu ballaaran ee xoogga lagu saareyo uu yahay arrimmaha soo galootiga.
a- siyaasadda soo-galootiga
b- siyaasadda iskuulka
c- siyaasadda cimilada
d- siyaasadda dhaqaalaha
e- siyaasadda shaqada
f- siyaasadda ammaanka iyo wixii la mid ah. Ayuu ccarabku ku dhuftay Stefan Löfven.
- Miisaaniyadda difaaca oo kor loo qaado.
- In la kordhiyo wada shaqeeynta ammaanka ee dalka Finland.
- In laga hor tago argagixisada.
- In la bilaabo wada hadal dhex mara Israa'iil iyo Falastiin iyo sidii laba dawladood oo siman, derisna ah loo heli lahaa.
Stefan Löfven ayaa sidoo kale carrabka ku adkeeyay dagaalka sokeeye ee ka aloosan Suuriya.
250 000 oo ruux ayaa ku naf waayey dagaalkaa.
In laga hor tago dadka ku dhimanaya badda meditreeniyanka. Howlihii ku wajahnaa halkaa ayaan ka sii wadi doonnaa.
- Degmooyinka dalku gebi ahaan iney gacan ka geeystaan qaabilaadda qaxootiga. Dhammaan waddammada xubnaha ka ah EU waa iney gacan ka geeystaan.
- Waxaan isugu yeeri doonaa kulan guud oo ey dhammaan ka qayb galaan xisbiyada, maamullada degmooyinka, ururrada bulshada, kuwa ciyaaraha sidii habka ugu wanaag-san bulshada looga qeyb gelin lahaa ajaaniibta.
- Degmooyinka in lagu taageero miisaaniyad intaa ka badan, sida uu sheegay Stefan Löfven.
- Dhanka sinnaanta, mar uu ka hadlayay ayuu sheegay Löfven in shaqada isku midka ah lagu qaato mushaarooyin isku mid ah. Howl culus ayaa na hor taala ayuu sheegay Löfven.
- In shaqa la'aanta la gaarsiiyo heerka ugu hooseeya ee waddammada EU.
- Dhismaha hooyada oo kor loo qaado iyo hooyada ardeyda.
- Maal-gelinta is-gaarsiinta oo la korddhiyo.
- Maal-gelinta cimilada oo la kordhiyo.
- In Sweden ka mid noqoto waddammada ugu horeeya dhanka cilmi-baarista.
- Culuunta saayniska, cimilada iyo IT-ga in xoogga la saaro.
- in la dhiiri-geliyo howlaaha shirkadaha yar yar.
- Hab kor loogu qaadeyo kobaca alaabooyinka dibadda loo dhoofiyo.
- 375 000 oo ruux ayaa shaqa la'aan ku sugan, halka dhanka kale ey jiraan boosas shaqaale loo la' yahay oo siddeetan kun kor u dhaafaya. Waa wax aan loo dul-qaadan karin. Waa in la helo aqoon kororssi.
- Cidna uma dhalan iney shaqa la'aan joogto ah ku jirto.
- Suurtagalka in shaqa la helo waa in loo sinnaado.
- Aqoonta, sinnaanta iyo mushaarooyinka oo kor loo qaado, ayuu sheegay Stefan Löfven iney yihiin saddexda gool ee dawladdu ka leedahay tacliinta.
- Dhanka cimilada mar uu ka hadlayay ayuu sheegay Löfven in goolka dawladdu yahay sidii dalkani uga mid noqon lahaa waddammada ugu horreeya ee isticmaala guud ahaan tamar aan cimilada wax u dhimin.
- Sweden waa inuu noqdo waddan ammaan ah. In sida ugu adag looga hor-tago falalka dembiyada.
- In la maal-geliyo xaafadaha ey dembiyadu ku badan yihiin.
- In gacan xooggan lagu taageero ciidanka ammaanka iyo sidey uga hor-tegi lahaayeen dembiyada.
- Dimoqoraadiyaddu waa inay sareeyso.
- In la soo saaro qorshe guud ee ka hor-tagaya cunsuriyadda iyo faqooqa.
- Sweden waa in cid walba ugu noolaan karto sida ay tahay iyada oo aan lagu faqooqin.